Izinto ozozenza e-Sun City Resort
I-Sun City Resort inikeza imisebenzi ebonakala engapheli ezoqinisekisa ukuthi uneholide elihle.Ngaphandle kweBalloon ukugibela ekuseni, i-safaris yasemini kanye namabhasi ama-evening (ama-braai's) ehlathini, kunezinto ezihamba phambili ze-Sun City Resort ukuze zidle Lokhu kuhlanganisa ukugubha umnsalo, i-quad ngebhayisikili, ukudlwengula, ukudubula kwebumba, imisebenzi yamanzi kanye nokugibela ibhaluni emoyeni oshisayo. Ukuphepha kwezivakashi kuhlale kuyingqayizivele futhi yonke imishini isesimweni esiphezulu kakhulu.
yindlela yokuhola ihora eliholwa ngumqondisi onamandla kakhulu. Abahlanganyeli akudingeki ukuthi babe nolwazi oludlule njengoba imfundo yokuphatha imoto iyingxenye yephakheji.
Ukudubula kokubhekwa komgogodla umsebenzi wokuzilibazisa kakhulu, odumile ngabancane nabancane. Abafundisi baqondisa abahlanganyeli futhi asikho isidingo sokuhlangenwe nakho kwangaphambilini.
Izindebe zanamuhla eziphindaphindiwe kanye nemishini eminingi yesikhathi esinjengemigodi eyinkimbinkimbi kanye nemigqoqo enamandla isetshenziselwa ubuciko wokudubula wasendulo.
I-Sun City Resort inikeza imisebenzi enhle yamanzi ehlanganisa ukugibela izikebhe zamabhanana, ukuhamba ngamanzi, ukuhamba ngezinyawo, ukugibela izikebhe nokuningi. I-Valley of the Waves ine-slides ethokozisayo.
Abathanda ukugibela amahhashi eSun City, kunendlela yokuhamba emigwaqweni encane engxenyeni encane ye-Private Game Park, efanelekayo kumuntu omusha, ehambisana nomkhwenyana.
I-Extreme Adventure Slide ephakeme ngamamitha angu-280, amakhilomitha amabili ubude & ifinyelela ngesivinini kuya ku-120 km / h. I-adventure engaphuthelwa. Bhala esikhungweni se-Welcome.
Ngesikhathi seholidini lakho le-Sun City ungaqala uhambo lwamasiko. Amaphuzu avelele ahlanganisa ukuhlala kwansuku zonke ezindaweni zasemaphandleni ngokusebenzisa ingoma, umdanso, ukukhomba izinhlobo zokugqoka zendabuko kanye nesampula ukudla okujwayelekile. Kusihlwa imibukiso yemidanso yamasiko iyatholakala.
Imisebenzi ye-Sun City ibandakanya ukuhamba ngebhayisikili. Jabulela indawo enhle emgwaqeni. Ama-Scooters atholakalayo futhi ayajabulisa wonke umndeni.
i-Tennis ne- Squash
Kunezinkantolo zezintambo ezitholakala eceleni kweCascades, lapho izivakashi zijabulela umdlalo we-tennis noma zingaba nomdlalo we-squash kumnyango olandelayo we-Gary Player Country Club.